Ugu Weyn Ee Ficus benjamina
Benjamin Ficus, daryeelka guriga ee warshadda
Ficus Benjamin waxaa loo tixgeliyaa inay dad badani noqdaan xayawaan qoys, gurigana si gaar ah ugu koraan waxaa loo tixgeliyaa amaan. Si kastaba ha ahaatee, kuwa jecel dhirta indoor-ka waxay og yihiin in koritaanka wanaagsan ee warshadu ay u baahan tahay daryeel habboon oo haboon. Waxaan hoos ku tilmaami doonaa sida loo daryeelo ficus iyo si guul leh u dhufto.
Sida loo daweeyo ficus, noocyada ugu waaweyn ee cudurada iyo cayayaanka dhirta gudaha
Benjamin Ficus waa qoys dusha laga saaro. Dabeecadda, dhirtu waxay gaartaa 25 mitir ee dhererka. Ficus wuxuu uqalmaa jawi diiran oo qoyan - Hindiya, Shiinaha, Koonfur Asiya, Filibiin iyo waqooyiga Australia. Warshadda waxay magaceeda ku heshay sharaf ka mid ah khabiirada Ingiriisiga ah ee Benjamin Jackson.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ficus benjamina 2020